विशेष Archives ~ Page4of 44 ~ Banking Khabar
गो–एएमएल’ लागु हुँदै, माघ १ गतेबाट चेक डिपोजिट गर्दा विवरण खुलाउनुपर्ने
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आगामी १ माघ गतेबाट अनिवार्य रूपमा ‘गो–एएमएल’ मा जान निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ सिस्टम –एएमएललाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । एमएलमा कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मिति नै तोकेर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जान निर्देशन दिएको हो ।
मर्जर भाँडीने कारण : संचालक समितिमा को को रहने ? सिइओ र डेपुटी को हुने ?
बैंकिङ खबर । मर्जर प्रक्रियामा दुई संस्था गाभिँदा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित सबै पक्ष एक हुन्छन् । दुई संस्थाको संचालक समिति, कर्मचारी, सेयरधनी र ग्राहक सबै पक्ष नै मर्जर प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन पुग्दछन् । यी सबै पक्षहरुको समायोजन गर्नु नै मर्जर प्रकृयाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बन्ने गरेको छ । अध्ययनले के भन्छ ? मर्जरको प्रभावबारे नेपाल
गरिवी राष्ट्रमा ‘लघुवित्तको आबश्यक्ता र महत्व’ धेरै
बैंकिङ खबर । संसारभरको सम्पत्तिको बराबर वितरण हुने हो भने हरेक कुनाका मानिसलाई आरामले जिन्दगी विताउन पुग्छ । तर, यहाँ सम्पत्तिको समान वितरण छैन । केही मुलुक अत्याधिक विलाशी जिवन विताइरहेका छन् भने कतिपय देशमा खानकै लागि पनि संघर्ष गरिरहनु परेको छ । देशको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, पूर्वाधारको विकास, खानीजन्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय लगायतका हिसाबले अमेरिकी,
सहुलीयतपूर्ण कर्जा लक्षित बर्गसम्म पुग्नुपर्छ
बैंकिङ खबर । उद्यमशीलता बढाउन सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले सुरुमा सात शीर्षकमा व्याज अनुदानको कर्जा दिने गरेकोमा अहिले दुई क्षेत्र थपिएका छन् । जसअनुसार, अहिले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च
सहुलियतपूर्ण कर्जा : मिहिनेती हातहरुलाई पन्छाएर पहुँचवालाको पोल्टामा
बैंकिङ खबर । उद्यमशीलता बढाउन सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले सुरुमा सात शीर्षकमा व्याज अनुदानको कर्जा दिने गरेकोमा अहिले दुई क्षेत्र थपिएका छन् । जसअनुसार, अहिले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा,
बैंक लुट्ने काममा कर्मचारीकै संलग्नता, अब सम्भव छैन सुरक्षाबाट उम्कन
बैंकिङ खबर / बैंकमा देखाइएको ग्राहक पहिचान अर्थात बैंकमा रहेको कुनै पनि ग्राहकको बारेमा रिपोर्ट यो गिरोहलाई कसरी थाहा भयो ? जव कि एक वा दुई संख्या होइन, सयौंको संख्यामा ग्राहकको खाता, हस्ताक्षर र पहिचान थाहा गरेर नक्कली काम गर्न सक्ने अबस्थामा एउटा गिरोह पुग्यो । प्रहरीको कुरा सुन्दा निकै आश्चर्यजनक र डर लाग्दो छ ।
बैंकिङ कसुरका अभियुक्त अजय श्रेष्ठलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
बैंकिङ खबर । बैंकिङ कसुरमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व बैंकर अजय श्रेष्ठलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पाटन उच्च अदालतले थुनामा राख्न गरेको आदेश खारेज गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न भनेको हो। आइतबार न्यायाधिसहरु सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा दरखास्त आवहान, बोर्डले अध्यक्ष पाउन केही समय लाग्ने
बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष छनोटको प्रक्रियामा प्रतिश्प्रर्धाबाट आवहान गरेको छ । समितिले पहिलो पटक सूचना जारी गरी अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । जसअनुसार योग्यता पुगेको उम्मेदवारले १५ दिनभित्र समितिको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ । अध्यक्षका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजीबजार विकास, आर्थिक, वित्तीय,
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु : गण्डकीको नाफा घट्यो, मुक्तिनाथले सबैभन्दा धेरै कमायो
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय स्तरका १० वटा विकास बैंकहरुमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा धेरै नाफा मुक्तिनाथ विकास बैंकले कमाएको छ । सबैभन्दा कम नाफा कामना सेवा विकास बैंकले कमाएको छ । गण्डकी विकास बैंकबाहेक सबैको नाफा गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा बढेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंक चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमसमा
बैंकिङ नलेज, यति भए पुग्छ : (हेर्नुस् ४७ बुँदामा)
बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय बैंकिङ जागीरमा आकर्षण बढिरहेको छ । फलस्वरुप, व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या बढेको छ । यसले बैंकिङ जागीरमा प्रतिष्पर्धा बढाएको छ । त्यसमाथि सर्टिफिकेटकै भरमा बैंकमा जागीर पाउँछु भन्ने विद्यार्थीहरुको सोचाईका कारण उनीहरु बेरोजगार नै बस्नुपरेको छ । वास्तवमा बैंकमा जागीर गर्नका लागि सर्टिफिकेट मात्र नभएर व्यवहारिक ज्ञानहरु पनि
पाँच बर्षे नेपाली बैंकिङ ईतिहास : अत्याधिक शाखा बृद्धि र बैंकिङ पहुँचमा फड्को
बैंकिङ खबर । विगत केही वर्ष यता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र वित्तीय पहुँच विस्तारका कारण मानिसहरु बचत गर्न थालेका छन्, उद्यमशीलतातर्फ लागेका छन्, बैंकबाट कारोबार गर्न थालेका छन् । आजभन्दा पाँच वर्षअघि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच खासै विस्तार भएको थिएन । ३० वटा वाणिज्य बैंक,
अफ्रिकि मुलुकहरुमा माइक्रो फाइनान्सले बढायो बैंकिङ पहुँच (हेरौं पाँच मुलुकको बैंकिङ अबस्था)
बैंकिङ क्षेत्रको करीयर : कस्तो ‘आचरण’ ? कस्तो ‘नलेज’ ? कस्तो ‘अनुभव’ ?
अनुभव कहाँबाट लिने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खुलाएको भ्याकेन्सी हेरेर प्रायःको प्रश्न हुन्छ – ‘अनुभव कहाँबाट ल्याउने ?’ बैंकहरुले इन्टर्नसिपका लागि पनि विज्ञापन गरेका हुन्छन् भने अनुभव नभएकाहरुलाई पनि नियुक्त गर्ने गरी सहायक पदहरुमा पनि कर्मचारी मागेका हुन्छन् । यस्ता पदहरुमा एप्लाई गरेर अनुभव लिन सकिन्छ । अनुभव प्राप्त भएपछि आफूले चाहेको पदमा एप्लाई
बैंकिङ टेक्नोलोजीको प्रयोग बढ्यो, करिव ६८ लाख नेपालीले डेबिट कार्ड प्रयोग गर्दै
बैंकिङ खबर । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै सुधार भएको छ । वित्तीय पहुँच बडेर ६०.९ प्रतिशत पुगेको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । बैंकमा शाखा खोल्ने र बैंकबाट कारोबार गर्नेको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । साथमा बैंकिङ प्रविधिका प्रयोगकर्ता पनि बढ्न थालेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक